Zvakanakira uye Zvakaipa zveProgressive Web Apps - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Progressive Web Apps, Web Development
PWA inobvisa kukwana kwewebhu mhinduro maererano nekuita, mhando yeinternet yekubatanidza uye inotsvedza yemuno app-sechiitiko pane nhare mbozha uye webhu mabhurawuza. NePWA, zvinokwanisika kusanganisa yakaderera mutengo mitambo yewebhu uye Mobile mafomu ayo anowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzezvitoro. A PWA inoshanda zvese zvishandiso semhinduro imwe uye inogona kushandiswa se mobile app kana webhusaiti.
Mazuva ano mawebhu webhu ane zvakafanana maficha uye kutaridzika kune Chizvarwa Mobile Apps, ichivaita vashandisi-vane ushamwari. Iwe hausi kuzoona musiyano kana uchifamba uye uchibatana mu-app chimiro. Pamusoro pekuvandudza ruzivo rwevashandisi, maapplication emuno anopa mushandisi-akasarudzika maficha asingakwanise kuverengerwa muwebhusaiti.
Progressive Web Apps (PWAs) ndezvemazuva ano zvekushandisa zvewebhu zvinosanganisa akanakisa maficha emawebhusaiti uye echinyakare maapplication. Ivo vanoshanda semapeji ewebhu nekuti ivo vanoremedza mapeji ewebhu neese maficha uye zvakanakira zvenguva dzose mapeji ewebhu uye anoshandiswa nemabhurawuza azvino uno. Kwete runyorwa rweakanyanya kunaka nezvakanakira zve inofambira mberi webhu webhu zvingave zvakakwana pasina kutaura chokwadi chekuti maPWA anoshandisa akawanda mapuratifomu-akasarudzika maficha.
PWAs dzinokutendera iwe kuti upe vashandisi chiitiko chisingachinjiki neiyo yakafanana interface mubrowser yavo, zvisinei nekuti ndeipi app yakaiswa pane yavo kifaa. Izvi zvinobvisa kudiwa kwekudzidza anopfuura mumwe mushandisi interface, chiitiko chinokanganisa vashandisi vajaira kune nharembozha webhu uye maapplication emuno.
Dambudziko hombe ne Mobile mafomu ndeyekuti inofanirwa kutorwa pasi uye kuiswa pane akawanda madhijitari, ayo anotora yakawanda nzvimbo. Muchokwadi, 25% yevashandisi veapp vanotaura kuti vangadzime iyo app kana vachida imwe nzvimbo pane avo mafoni. Maitiro ekumisikidza anotorawo chinguva uye vanopfuura makumi mashanu muzana evashandisi vangangoshandisa mawebhusaiti ane maratidziro uye mawebhu webhu ekutenga nekutarisa kana vasingade kurodha app.
Kunyangwe iri mukana wekuti PWA haidi kutevedzera maitiro akareba ekurodha pasi app senge yekuzvarwa application, ichiri kupotsa chikamu chakakura chevashandisi vanotsvaga iyo app muApp Store. Hupenyu hwepamusoro hwebhatiri zvakare iri dambudziko nekuda kwekushayikwa kwekutsigirwa kwemuchinjiko-app logins. MaPWAs anoshandisa bhatiri rakanyanya kupfuura maapplication echinyakare nekuti ivo vanonyora yakakwira kodhi yewebhu uye foni inofanirwa kushanda zvakanyanya kuidudzira.
Vashandisi vanofanirwa kurodha pasi nekuisa maapplication mumashure, izvo zvinokanganisa maitiro ekutanga ekubatanidza. Kune rimwe divi, vashandisi vanofanirwa kutsvaga kuchitoro cheapp kuti vadzivise.
Kutsvaga-kwakavakirwa-izwi kunofumura vashandisi vako vePWA kune maapplication anowanikwa pamusika. Nekuti maPWA akagadziridzwa kune mawebhusaiti, vashandisi vanogona kuzviwana zviri nyore paInternet, izvo zvinoderedza kushambadzira kwako.
Munguva yevatengi vanoziva brand, makambani anotarisa kune vashandisi. App Store ine mukana wekuti inogona kusvika kune yakakura vateereri mune imwe nzira. Kushambadzira kunoita zvakawanda kusimudzira shanduko uye kutungamira chizvarwa nekugadzira nyore kushandisa.
Kana iwe ukagadzira PWA, hauzoratidzirwe kumakambani akaita seApple uye Android app zvitoro. Iwo maapplication ari muPWA anokurumidza, anoshanda, akapusa, ane app-like navigation (sezvakataurwa pamusoro) uye wedzera bhatani remba kuti uwane. smartphone zvinhu zvakaita sekuzivisa zviziviso, kushandisa kamera, Geolocation kutevera etc.
Kana iwe uine zviwanikwa zvePWA pachinzvimbo chekuzvarwa app, une mukana we organic traffic kubva kunjini dzekutsvaga, mashopu ezvitoro uye Google Play ine yakakwana SEO neASO. Sezvo maPWA maapplication ane maapplication anoteedzera mawebhusaiti, vashandisi havangowana yako app muzvitoro zveapp. Kana iyo purogiramu yawanikwa, ichaonekwa kune chero munhu anoziva nezveapp uye chikuva.
Zvirongwa zveHybrid sarudzo yakanaka kune avo vanoda kusvika kune vateereri vakawanda neyakajairika mushandisi base. Izvo zvakare zvakanaka kana iwe usingade kuita kwepamusoro kana kugona kwepasirese, kana kana iwe usina nguva kana mari yekudyara mune maviri akasiyana maapplication. MaPWAs haatore nzvimbo pafoni yako kunge maapplication emuno, asi iwe uchiri kuda webhu browser kuti umhanye navo.
MaNative maapplication sarudzo yakanaka kana iwe usina bhajeti kana zvipingamupinyi zvenguva, kana kana app yako ichida zvakanyanya kushandiswa kweahardware maficha emidziyo. Zvitoro zveApple zvinobatsira, zvine raibhurari inobatsira uye inochengetera zvakawanda zvemukati meapp zvaunoda. Ivo havangopa chete huchokwadi uye hwemagariro humbowo hweapuro kuburikidza neanogona kuongororwa evashandisi asiwo anoshanda sekatalog inobvumidza vashandisi kutsvaga nekuwana maapplication akakodzera.
Kufambira mberi kwewebhu maapp bvisa kukosha kwekushanyira zvitoro zveapp kurodha maapplication, ayo anochengetedza nguva neInternet data yevashandisi. Kungofanana nevatengi vanowana Mobile Apps zvinoyevedza kupfuura mawebhusaiti, inofambira mberi webhu webhu ipa vashandisi veapps zvakafanana ruzivo rwekunyudza uye mushandisi-seyazvino nharembozha app zvakananga mubrowser yavo.
Zvakanakira uye zvakaipira inofambira mberi webhu webhu zvinouya kubva kuchokwadi chekuti PWAs inosanganisa iko nyore uye kusvika kwewebhu kushanda ne Chizvarwa Mobile Apps. NePWAs, vashandisi vanogona kuwana kushanda kwakazara kwemaapuro avo pasina kufunga nezvekuchengetedza kwavo uye nguva refu yekurodha. Dhizaini yePWAs yakafanana neiyo yeanowanikwa maapps, uye ine mhedzisiro yakafanana pane yevashandisi ruzivo nekumhanya kwakafanana, kupindura, yakazara webhusaiti kushanda, Database kuwana uye otomatiki data.
Wepamusoro Bhenefiti Yekuhaya Iwo Akanyanya Webhu Dhizaini
Aug 9 | Web Development, Website Design
Zvirongwa Ndo Itsva Webhusaiti yeiyo 2020s
Jun 30 | Web Development
Dzazvino tekinoroji kuti ibudirire muindasitiri yekuvandudza indasitiri
Apr 13 | zvigadzirwa zvetekinoroji, Web Development